Orylọ ọrụ nrụpụta ihe Hydraulic - China Hydraulic rescue tool Manufacturers, Suppliers
Nlereanya ： BJQ63 / 0.6 Ngwa: BJQ63 / 0.6 A na-ejikarị Unit Hydraulic Power Unit eme ihe na mpaghara nnapụta ihe mberede okporo ụzọ, enyemaka ọdachi ala ọma jijiji na nnapụta ihe ọghọm. Ọ bụ isi iyi nke ike hydraulic forcible ntinye ngwaọrụ. Ihe Njirimara: Ojiji dị ukwuu na nrụpụta nrụpụta abụọ dị elu na ala, ntụgharị akpaka, wee mezie oge nnapụta nwere ike iji ogologo oge. Ọ na-eji mmanụ ụgbọ elu ụgbọelu, nke mere na ọ nwere ike ịrụ ọrụ n'okpuru okpomọkụ -30 ℃ ruo 55 ℃. Ọ nwere ike ijikọ ngwaọrụ abụọ n'otu oge ...
Ngwakọta Ngwakọta Hydraulic
Nlereanya ： GYJK-36.8 ～ 42.7 / 20-3 Ngwa GYJK-36.8 ～ 42.7 / 20-3 Hydraulic Combi-Tool Cutter-Spreader bụ nke a na-ejikarị na mpaghara nke nnapụta ihe mberede okporo ụzọ, enyemaka ọdachi ala ọma jijiji, nnapụta ihe mberede na ihe ndị ọzọ. Odabara maka ọrụ nnapụta ngagharị. Ebipụ metal Ọdịdị, ụgbọala akụrụngwa, anwụrụ na metal mpempe akwụkwọ. Ihe njirimara GYJK-36.8 ～ 42.7 / 20-3 Hydraulic Combi-Tool Cutter-Spreader na-agụnye ịkwa osisi, mmụba na traction. Kinddị ngwá ọrụ a dị ka clipper na gbasaa ...
Hydraulic Ram / Hydraulic nkwado mkpanaka
Nlereanya ： GYCD-130/750 Ngwa: GYCD-130/750 Nkwado Hydraulic a na-ejikarị eme ihe n'ọhịa nke okporo ụzọ na okporo ụzọ ụgbọ oloko, ọdachi ikuku na nnapụta osimiri, ụlọ na enyemaka ọdachi. Key Akụkụ: Mmanụ cylinder mejupụtara nnukwu ike dị arọ alloy. Ngwa inyeaka: ụgbọ ịnyịnya mandril Ọ na-ewe ntakịrị maka legging, mgbe ahụ ọ na-agba ọsọ usoro nnapụta. A na-akọwapụta ngwụcha nke ezé antiskid ahụ nke ọma, ya mere ọ gaghị amị amị na nrụgide. Abụọ na-ụzọ haịdrọlik mkpọchi jikọtara Wi ...
Dị ihe atụ: GYJQ-25/125 Ahịa: TOPSKY Ngwa: GYJQ-25/125 bụ nke a na-ejikarị na nnapụta okporo ụzọ na okporo ụzọ okporo ụzọ, ọdachi ala ọma jijiji, ụlọ dara, ọdachi ikuku, nsogbu ụgbọ mmiri na ihe ndị ọzọ. Tingcha Mgbapụta: akụrụngwa ngwongwo, ngwongwo ígwè, pipeline, ụlọ mmanya akọwapụtara, efere ígwè na ihe ndị ọzọ. E ji mara: A na-eji nchara ígwè arụ ọrụ igwe dị elu. Elu ejiri anodizing. N'ihi ya, ọ nwere ezigbo wearability. A na-akwadebe akụkụ ndị na-agagharị agagharị na casing nchebe. Ndị ...
Nlereanya ： GYKZ-38.7 ～ 59.7 ／ 600 Ngwa: GYKZ-38.7 ～ 59.7 ／ 600 Hydraulic Spreader bụ nke a na-ejikarị na mpaghara nnapụta ihe mberede okporo ụzọ, enyemaka ọdachi ala ọma jijiji, nnapụta ihe mberede na na. A na-eji ya maka ịkwaga na ibuli ihe mgbochi, ihe na-eme ka ihe na-agbasa ma gbasaa ihe ntinye. O nwere ike deform metal Ọdịdị dọwara nchara efere nke ụgbọ ala elu. Ọ na-arụ ọrụ na zipa ma na-ewepụ ihe mgbochi n'okporo ụzọ. E ji mara: Mgbasa anya: 600mm Ọ na-ewe obere oge mgbe ope ...
Akwụkwọ mgbapụta ntuziaka BS-63 / 0.07
Njirimara na-enye nkwado maka isi otu ngwa ngwa ngwa hydraulic. Enweghị mmanụ ma ọ bụ ọkụ eletrik dị mkpa, ọrụ aka nwere ike ịmepụta ike hydraulic, na ime ime zuru oke nwere ike ịgbanwe kpamkpam n'etiti nrụgide dị elu na nke dị ala iji melite arụmọrụ nnapụta. 1. Otu interface interface, nwere ike ịrụ ọrụ n'okpuru nrụgide, otu nzọụkwụ. 2, 360-ogo n'usoro snap interface, ihe adaba na odi mfe ọrụ. Naa gosiri ịrụ ọrụ mgbali: 63MPa Hydraulic mmanụ tank ikike: ≧ 2.0L Low Voltag ...
Arọ haịdrọlik akwado ebule Model GYCD-120 / 450-750
Njirimara Enwere ike iji ebule ahụ maka nkwado, traction na arụmọrụ ndị ọzọ na saịtị nnapụta. Tụkwasị na nke ahụ, ejirila usoro nke ngwaahịa ahụ rụọ ọrụ nke ọma, ebe nkwado na strok abawanyela. Oghere ohere nnapụta. 1. Ugboro abụọ-tube otu interface imewe, nke nwere ike rụọ ọrụ n'okpuru nrụgide n'otu nzọụkwụ. 2. The interface bụ a 360-ogo n'usoro nkechi, nke bụ ihe adaba na odi mfe na-arụ ọrụ. 3. Na-enweghị mmịfe mgba ọkụ akara maka ezi ọrụ. 4. Ọ na --ewe ụzọ abụọ ...
Arọ haịdrọlik cutter Model GYJQ-28/125
Njirimara A pụrụ iji cutter ahụ rụọ ọrụ dịka ịcha na nkewa na saịtị nnapụta. Na mgbakwunye, emelitere ihe dị na nsọtụ iji mee ka nchacha ihu. Enwekwu ike isi ike, dị nchebe n'oge eji. 1. Ugboro abụọ-tube otu interface imewe, nke nwere ike rụọ ọrụ n'okpuru nrụgide n'otu nzọụkwụ. 2. The interface bụ a 360-ogo n'usoro nkechi, nke bụ ihe adaba na odi mfe na-arụ ọrụ. 3. Non-ileghara mgba ọkụ akara maka ọzọ ezi ọrụ 4. Ọ adopts abụọ ụzọ haịdrọlik loc ...
Arọ haịdrọlik cutter & spreader Model: GYJK-25-40 / 28-10
Njirimara Ngwakọta ngwungwu enwere ike iji maka mmụba, ịkwa osisi, clamping, na arụmọrụ ndị ọzọ na saịtị nnapụta. Ke adianade do, mma onu ihe e emelitere ka aka anwụrụ-eguzogide ma na mma onu gloss. Enwekwu ike isi ike, dị nchebe n'oge eji. 1. Ugboro abụọ-tube otu interface imewe, nke nwere ike rụọ ọrụ n'okpuru nrụgide n'otu nzọụkwụ. 2. The interface bụ a 360-ogo n'usoro nkechi, nke bụ ihe adaba na odi mfe na-arụ ọrụ. 3. Non-ileghara mgba ọkụ akara maka ọzọ ...
Arọ haịdrọlik moto mgbapụta BJQ-63 / 0.4S
Njirimara A pụrụ iji onye na-agbasa ahụ mee ihe maka mmeba, nkwụsị, ịkwa ákwá, ịpịpu ihe na arụmọrụ ndị ọzọ na saịtị nnapụta. Tụkwasị na nke ahụ, emelitere ihe onwunwe iji mee ka ikike mgbochi extrusion dịkwuo elu, na-ebuli usoro nke ngwaahịa ahụ, ma bulie oghere mmebawanye. 1. Ugboro abụọ-tube otu interface imewe, nke nwere ike rụọ ọrụ n'okpuru nrụgide n'otu nzọụkwụ. 2. The interface bụ a 360-ogo n'usoro nkechi, nke bụ ihe adaba na odi mfe na-arụ ọrụ. 3. Mgbanwe na-enweghị mgbapụta ...
Njirimara Bubata Honda mmanụ ụgbọala, ike siri ike ma arụmọrụ ya kwụsiri ike. 1. Dual mmepụta Ọdịdị, nwere ike ijikọ ngwaọrụ abụọ iji n'otu oge. 2, otu interface interface, nwere ike rụọ ọrụ na nrụgide, n'otu nzọụkwụ. 3, Ngozi 360 na-agbagharị snap interface, ọrụ dị mfe ma dị nchebe. 4. Ezigbo arụmọrụ dissipation na-eme ka oge ọrụ rụọ ọrụ. 5. Obere ụzụ na-enyere ndị na-azọpụta na ndị tọrọ atọ aka ịkwalite ụda mkpọtụ. 6. Light light na obere size ...
Ndenye plọg ndọtị mkpanaka
1, ọkọlọtọ size bụ 125/150 / 200mm atọ.
2. Ndenye wet ụdị nkechi imewe. “1 abụọ” iji mezue mkpatị mgbatị na plọg pistin na nkwụpụ njikọ.
3, mgbochi skid knurling imewe, ike na aka na esemokwu, mfe iji na-enweghị skidding.